Maodzanyemba akadziva kumadokero Airlines Anoti Jamaica's Flight Operations paUkuswing
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Maodzanyemba akadziva kumadokero Airlines Anoti Jamaica's Flight Operations paUkuswing
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Southwest Airlines inotangisa ndege nyowani dzeHawaii kubva kuLas Vegas, Los Angeles, uye Phoenix
MaSouthwest Airlines maneja neChitatu, Gunyana 22, 2021, kuDallas, Texas, dzimbahwe, vakazivisa Gurukota rezvekushanya kuJamaica, Hon. Edmund Bartlett, kuti kumhanya kwavo kuMontego Bay mumavhiki anouya nemwedzi iri padyo ne2019 pre-denda rekodhi, zvichiratidza kudiwa kwekuenda kuJamaica nevafambi veUS.
Vatungamiriri vezvekushanya muJamaica vakabata nhevedzano yemisangano nevatungamiriri vemaindasitiri ekufambisa kuyambuka United States neCanada misika sosi.
Chinangwa ndechekuwedzera vanosvika kunzvimbo yacho pamwe nekusimudzira kumwe kudyara munzvimbo yekushanya.
Kubatana kwakasimba pakati peJamaica neSouthwest Airlines kuri kuwedzera chikamu chenyika yekushanya munguva dzino dzakaoma.
Maodzanyemba akadziva kumadokero ndeimwe yendege huru kwazvo muUnited States uye ndiyo yepasi rose inodhura nendege yendege. Inoshanda nendege dzisingamisi pakati penzvimbo huru dzendege dzeUS dzeHouston (Hobby), Fort Lauderdale, Baltimore, Washington, Orlando, Chicago (Midway), St. Louis, neMontego Bay.
Gurukota rakabatanidzwa mumusangano naDirector we Tourism, Donovan White; Senior Strategist mubazi rezveKushanya, Delano Seiveright; uye Mutevedzeri Director weKushanya kuAmerica, Donnie Dawson. Vari kubata misangano yakati wandei nevatungamiriri vemaindasitiri ekufambisa mumisika mikuru yeJamaica, United States neCanada, kuwedzera vanosvika kunzvimbo kwavanoenda mumavhiki nemwedzi iri kuuya pamwe nekusimudzira kumwe kudyara munzvimbo yekushanya.
Jamaica Gurukota Rezvekushanya, Hon. Edmund Bartlett
Bartlett akatsanangura Jamaica kubudirira kuvhurazve gore rapfuura pakati penjodzi ye COVID-19, kumisikidzwa kweResilient Corridors, inozivikanwa pasi rose seCOVID yakachengeteka kune vashanyi nemaJamaica zvakafanana, uye kukosha kwekudyidzana kwakasimba pakati peJamaica neSouthwest Airlines mukukudziridza chikamu chenyika chekushanya mune izvi nguva dzakaoma.
Maodzanyemba akadziva kumadokero's, Senior Director weStrategic Planning & Airline Partnerships, Steven Swan, akacherekedza izvozvo Jamaika anga ari "anofunga," "akajeka," "ari nyore kutaura naye," uye anozvirumbidza "akanaka mutoro zvinhu." Vatungamiriri venhandare yendege vakacherechedzawo kuti nepo musiyano weDelta weCOVID-19 wakonzeresa "kunyura" mukufambiswa kwemudzimba nekune dzimwe nyika, vanoramba vachiita zvakanaka uye vane chivimbo zvikuru nezve kukura mune ramangwana.